Banyere Anyị - Guangzhou Beyond Lighting Co., Limited
Guangzhou Beyond Lighting Co., Limited, bụ ọkachamara na -emepụta ọkụ na -emepụta ọkụ na China. Ọ nwere ihe nrụpụta ọkụ ọkụ ihe karịrị afọ iri nwere ahụmịhe R&D nwere onwe ya, nwere agbụ ngwaahịa zuru oke na akụrụngwa ọkụ, nwere ngwaahịa usoro WASH nke emechara nke ọma n'etiti ndị na -emepụta ihe na China.
Anyị nwere ọkụ dị elu na ọkụ ọkụ ọhụrụ na-ebute ụzọ, na-eche maka njikwa mma na ọrụ ịre ahịa, ngwaahịa na-enye akwụkwọ ikike afọ 2. A na-etinye ngwaahịa n'ọrụ n'ọtụtụ ihe nkiri TV, ihe nkiri ndụ, ụka, ụlọ ihe nkiri, ememme egwu, klọb, wdg. Mmemme.
N'azụ nwere ọrụ 6,000 Square Mita, ahịrị mmepụta 18, kwa afọ n'ihe dị ka usoro 5-7 ọhụrụ ewepụtara n'ahịa. Ndị otu R&D nọọrọ onwe ha nwere ndị injinia 8 na nke ọ bụla nwere ahụmịhe karịrị afọ 10 na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ.
Anyị bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na -emepụta ntị na China nke na -amalite ịzụlite na imepụta ihe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ 40W na 60W dị elu.
Ngwaahịa niile gafere CE, EMC, LVD, RoHS ọkọlọtọ.
N'ime afọ 10 ahụmịhe R&D nọọrọ onwe ya. 2. Nwee ngwaahịa mmetụta ịsa ahụ zuru oke n'etiti ụlọ ọrụ China. 3. Teknụzụ ngwaahịa dị n'okpuru ọkọlọtọ ahịa Europe.
4. Usoro QC dị jụụ nke na -ekpuchi 100% ICQ, 100% nyocha ngwaahịa emechara (opekata mpe awa 48), nnwale mmiri, nnwale oke okpomọkụ, Nmegharị nke ule ịma jijiji njem..etc.
Ahụmịhe imekọ ihe ọnụ na -ewu ewu nke nwere ike ime nzaghachi ngwa ngwa na ihe ndị ahịa chọrọ. 6. OEM bara ọgaranya, nkwado ODM & ahụmịhe ọrụ. 7.The ngwaahịa e kwupụtara site ọtụtụ nnukwu-ọnụ ọgụgụ arụmọrụ
Kwa afọ, anyị ga -azụlite ihe karịrị ụdị ọkụ ọkụ iri dị mma, etinyerela ọkụ anyị n'ọkwa dị iche iche nke ụlọ na nke mba ụwa, na -eji ya eme ihe n'ụlọ ezumike, ụlọ oriri na ọ publicụ publicụ na ebe ọha na nkeonwe, wdg, wee bupụ ya na Europe na America karịa mba 80 na mpaghara.
Kwa afọ anyị ga -esonye na ihe ngosi: Prolight + sound Guangzhou; Shanghai Prolight + Ụda ngosi; Ngosi nkwụ nke Beijing; Musikmesse & Prolight+ Sound Frankfurt; LDI na -egosi onye ọbịa na Las Vegas; NAMM RUSSIA+MUSIC MOSCOW
N'aka nke ọzọ, akara anyị, ebe ọ bụ akara ngosi pụtara ụlọ ọrụ anyị ga-eche ihu n'ahịa mba ụwa, gbalịsie ike imeju ihe ndị ahịa mba ụwa chọrọ, ka ọ bụrụ onye ndu na mpaghara ịchekwa ike, agba agba na ọgụgụ isi.
Ụlọọrụ Culture & Enterprise Mission:
1> Mepụta uru maka ndị ahịa, na -ekepụta ohere maka ndị ọrụ, na -ekepụta uru maka ụlọ ọrụ, iji mepụta akụ na ụba maka ọha mmadụ.
2> Ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa, ndị mmadụ, ịchụso ihe kacha mma, oke kachasị
3> Anyị na-agbaso ụkpụrụ ahịa, ịdị mma na mmepe, ọrụ na nchekwa, teknụzụ na ihe ọhụrụ iji gboo mkpa ndị ahịa dị ka ebumnuche.
4> N'ọfe bụ idobe ndị ahịa ọnụ ahịa dị mma maka ndị ahịa kacha mma.